Ku soo DHAWOOW
Baro inaad si wax ku ool ah ula xiriirto
Barashada sida loola xiriiro si hufan ayaa muhiim u ah dunida maanta. Haddii aad rabto inaad ku wanaajiso Ingiriisigaaga waraysi shaqo ama imtixaan waxbarasho, waan ku dabooli doonaa. Akadeemiyada Manzour, waxaan ku siin doonaa barnaamij onlayn ah oo ku jira 24 xirmo oo xiise leh oo barashada Ingiriisiga ah si aan kaaga kaxeeyo eber illaa geesi. Baakadaha mid walba waxaa ku jira lix xirfadood oo luuqadeed oo muhiim ah oo loogu talagalay xirfado kala duwan oo ka socda dhakhaatiirta, injineerada, qareennada ilaa kuwa doonaya inay bartaan Ingiriisiga si ay u safraan, shaqo u helaan, ama u diyaargaroobaan Imtixaanka IELTS. Waxa ugu weyn ee aan diiradda saarayaa waa hufnaanta iyo hubinta inaad waqtigaaga ku bixisid barashada waxa adiga kuugu muhiimsan taasina waa sababta dhammaan agabyada loogu habeeyay hab aad wax ku baran karto xawaarahaaga. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad sahamiso mareegaha oo aad aragto manhajka naftaada. Waad ila soo xiriiri kartaa adiga oo isticmaalaya sanduuqa wada sheekaysiga ee shaashadda hoosteeda. Waxaan sugayaa inaan war kaa helo.
Halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan agabyada kaabayaasha ah ee aad u baahan tahay si ay kaaga caawiyaan inaad xirfadahaaga ku barato naxwaha kaliya, laakiin sidoo kale erayada, sidoo kale akhriska iyo waxyaabo kaloo badan. Wax kasta oo aad ku aragto maktabaddayda dhammaantood waa buugaag luqadeed iyo sidoo kale shaqooyin suugaaneed oo aan si shakhsi ah u akhriyay, safarkeygii aan ku soo qaatay barashada Ingiriisiga, sidaa darteedna waxaan kula talinayaa hab haddii aad waligaa wax su’aalo ah aan awoodo inaan si shakhsi ahaan kuu caawiyo. Waxaad isticmaali kartaa jimicsiyada qaarkood gudaha buugaagtan wax -akhriska oo dhammaystiran koorsooyinkayga onleenka ah si aan u helo natiijo fiican.
Kahor intaadan bilaabin , waxaan kugula talinayaa inaad ka qayb qaadato qorshahayga si taxadar leh loo qorsheeyey iyo gaar ah online meelaynta tijaabi si aad u aragto meesha aad taagan tahay ilaa heerkaaga luqad ahaan kartida ayaa khuseysa. Tani waxay iga caawin doontaa inaan si sax ah kuugu hago waxayna kaa caawin doontaa inaad si habboon u doorato koorsooyinkaaga internetka ee kala duwan.